ကျူရှင်မယူ GUIDE မကူပဲ ၅ဘာသာဂုဏ်ထူးနဲ့ နှစ်ချင်းပေါက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မခက်ခက်လှိုင်. | CM
Home News ကျူရှင်မယူ GUIDE မကူပဲ ၅ဘာသာဂုဏ်ထူးနဲ့ နှစ်ချင်းပေါက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မခက်ခက်လှိုင်.
ကျူရှင်မယူ GUIDE မကူပဲ ၅ဘာသာဂုဏ်ထူးနဲ့ နှစ်ချင်းပေါက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မခက်ခက်လှိုင်.
2019 / 2020 ပညာသင်နှစ်……….ဧရာဝတီတိုင်း / အင်္ဂပူမြို့နယ်..အထက (ထန်ပင်ကုန်း)( ကညင်ဆိပ် )ကျေးရွာမှ ဒီကျောင်းသူမလေးဟာတက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲကို ၅ဘာသာဂုဏ်ထူးဖြင့်ထိုက်တန်စွာ အောင်မြင်သွားခဲ့ပါပြီ…….။
မိဘကချို့တဲ့ ဘဝနဲ့ပညာရေးကို ဖြတ်သန်းပြီးကျူ ရှင်မယူ ကိုဋ်မကူပဲ နှစ်ချင်းပေါက်အောင်မြင်သွားတဲ့ ” မခက်ခက်လှိုင် ” ၏…..ပါရမီနှင့် ကြိုးစားအားထုတ်မူ့ကို ဂုဏ်ယူပြီးချီးမြှောက်ထိုက်သလို စံပြအနေနဲ့လည်း အတုယူ သင့်ပါတယ်…………..။
Previous article(၅)ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် သမီးလေးအတွက် ဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်နေတဲ့ လူရွှင်တော် ဂေါ်ဇီလာ
Next article(၁၀) တန်း အောင်ထားတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက် တောနော် ရေတံခွန်မှာ ရေကူးရင်း ပျောက်ဆုံးနေ